डा. केसीको माग बेवास्त गर्दै चिकित्सा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी - Himalayamail.com
डा. केसीको माग बेवास्त गर्दै चिकित्सा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी
काठमाडौं। सरकारले डा. गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ संसदमा पेश गर्ने संसदको संभावित कार्यसूचीमा राखिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १६ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका गोविन्द केसीको विरोधकाबीच सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो। डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेका बेला सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो।
डा. केसीले माथेमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा छन् भने सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
१६ दिनदेखि जारी अनशनका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। सरकारले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने बताइरहेपनि डा. केसी आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नआउने अडानमा छन्। तर सरकारले केसीको अवस्था धेरै नाजुक भयो भने बल प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याइने बताएको छ।